Utuu walaloo ðŸ¤™
Category: Utuu walaloo
By Nikogar On 01.06.2021 Utuu walaloo Comments on Utuu walaloo
Please select a letter from the index above to see entries.
Design by: Qubee Technologies oroict. Sunday, October 11, Maxxansa Haaraa. Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti. Wirtuu Mammaaksa. Garaacha dheedhii garaatti beeki. Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu.
Haadha hinqabdu hakkoof boossi. Keessumaa qamalee raafuu keessati argu.
Sareen sarbaa hinqabdu mukarbaa hinyaabbattu. Gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu. Kan lafatti wal hintaane muka waliin hinkoru. Fincaan lukkuu kan arge haa himuu. Durattuu durii maalayyaa waaqoo lama tahe. Arrumaa salaattee arrumaa maraatte. Yaanni karaa hin dhaleessu. Qilleensarratti mana hin ijaaran. Dhugaan niqallatti malee hincittu. Osoo gubadhuun kolfa jette akaayiin.
Eboo darbatanii jinfuu hinqabatan. Akka cabanitti hin hokkolan. Niturra malee niurra jette boonbiin. Alaa manatti galan. Kokkolfaa nama nyaatti gonfaan. Katuffatantu ardaa dhaala. Bara barri argate buqqeetu dhagaa cabsa.
Qeerrensa eegee hin qaban qaban gad hin dhiisan. Muka biyya jiruun mana ijaaran. Haatee durbaa jennaan dur kaa jedhe mucaan. Ka bira dhahan hin beekne isaa dhahan hin beeku. Galle jette lafoon farda jala galtee. Hadaamii ollaa hagamsaa imimmaan irraa hinqooru. Baddu baddi malee saree ija hin dhiqan. Iilkaan mutaan seene budaan seene. Garaa ofiituu wollaalaaf heexoo itti dhugani Suuta ejjatan suuta qoreen nama woraanti. Bor ni agarta jennaan edana akkamitti bulee jedhe ballaan.
Dhukkubni na ajjeesuu hin jirre hamaaf tolaa addaan naaf baase. Cabaan baqaqatti erkate. Ija jirtu qorsa buusani.Bilisummaa â€¦ Oromiyaa â€¦ Oromummaa â€¦. Eebbisaa Addunyaa:. Jaagamaa Taaddalaa Jag : Haabultuu Dubbin. The Fallen Heroes. Bara durii sana yeroo heerri ture Saba guddaa tokko tu mootummaa ijaare Oyiruu miidhagaa caffee cuqilisaa Kuduraa fi fuduraa waa marti lalisaa. Kan nyaatamu marqaa kan dhugamu booka Martuu ofitti boona badda-daree fi dakaa. Kan hundarra caaluu eenyummaan haqamee Abbaan Gadaa gaddee bokkuun owwaalame!
Jallina akkasii goototi argani Heera deebisuudhaaf daggala seenani. Maatii fi jiruusaanii osoo hin ilaalani Oromummaa tursuuf wallaansoo eegalani. Goota boonaa sana kan diinni illee beektu Lammiif fi maatiin isaa maaliif hin yaadatu! Maaliif waliin teenyee maqaasaa hin farfannu! Maaliif yeroo mara hin galatteeffannu! Corannee Illilli, daraara arfaasaa Maaf hin faayyeessinu bakka awwalasaa!
Maqaa ijjoolle keenyaa kan gootaan moggaafnee Seenaa boonsaa sana itti dabarsineee Qubee gooti eegale yoo beekne barsiifne Yoo hin beekne barannee! Maaliif ruhii gootaa hin galatteeffanne? Warabeessi fi waangeen, wawwacoofi dhaddeen Eenyummasaa hin beektu beekufis hin feetu Gaaf-mara shira marti dhugaa gootaa awaalti.
Cumaa fi dhiiga isaa hadhooftuu fi dafqasaa Gaanii fi xuwwee seenaatti eenyu tu isaaf kuusa Maqaa goota sanaa boolla keessaa baasa? Log in - Posts - Add New .Ashamaa Akkam jirtu? Kallattii arfan irraan lammiileen koo martuu Nagaan sin gaafadhaa ashamaa akkam jirtu? Dur oromoon akkasitti walitti dhufu, Safuufi aadaa liqimsa,malee aakkifatee hin tufu, Harka lamaan hiixatee haammatee wal dubbisa, Hidda godhadhu' jedhee eebbisee wal guddisa, Hi' jedha dhaloonni ammaa immoo quba lama ol qabee, Haammatee wal dubbifnaan hoo silaa maqaasaatu cabee, otoo â€¦ Continue reading Ashamaa Akkam jirtuu?
Maaluma fakkaataa akkami bifnisaa? Diimaa gurraachamoo adii magariisaa? Waan akka Aannanii dhugamee nama qabbaneessu? Moo waan alanfatamu? Meeqatu guuttatee hawwii jireenya isaa? Gammachuu argatee kan ciise garaan isaa.
Nama meeqaa laataa kan harkaan gahate? Fedhii garaasaatii hawwii kan dhuunfatee. Meeqa duraa haftee hawwiin hawwii taatee? Hinaaffaan guutamtee hammeenyaan hudhamtee. Nama meeqaa laataa hawwee kan argate? Fedhii garaasaatii soonaan kan guuttate. Eenyutu natti himaa eenyutu beeka laataa? Eessa daangaan hawwii eessatti dhaabbataa? Hunduu yeroo qabaa maaliif jarjartanii? Skip to content.
Utuu naaf hindhagayin Firrikoo gamaanaa fi gamaa Bakka rakkoo kiyyaatti Situ dursee argama Aantiidhaafi obbolaa koo Dursitee natti siqxa Caba koo naaf dhidhiibdee Dhiiga koo narraa dhiqxa Kaasuu keetti na fuutee Qabdee lafaa na kaasta Dugda keetti na baattee Bowwaa keessaa na baafta Gaafa guyyaaa gammaachuu Wajjiniin nyaannee kolfaa Gaafa guyyaa dhiphinaa Kan dhukkubaa fi â€¦ Continue reading Sin Jaalladha Hiriyaa koo. Mana keetti koottuu gali Maalumaaf teessa ollaa Roorroo Oromiyaa tuqu Walumaan taanee lollaa Shiraafi holola diinaan Adda hinbaanu gonkumaa Oromiyaaf qabsoofna Kaayyyoon Keenyaa tokkuma Hiririsii fidii koottu Buttaa keetiifi muraasa Amma yoomiitti diinni Gidduu goree nu raasa?
Akka seera Gadaatti namni kamiyyuu kan umuriinsaa eyyamu hunuu adeemsa seera tumaa irratti argamuuf mirga qofa osoo hin taane, dirqama sabummaas qaba. Adeemsa seera tumaa kanarrattis namni hunduu â€¦ Continue reading Adeemsa Seera Tumaa.
Koroonaa vaayiraasii mata nu yaabuu feeti. Of eguu ni dandeenya sodaa hin barbaachisuu. Ittisa koroonaadhaf gorsaa oggeessa haa dhageenyu. Yeroon kun ni dabartii hin dabarrtuu hin se'iina. Wareegama qaalii hacuccaa bara hedduu. Qilleensarraa hin dhufne tolaatis as hin geenye. Salphoon seenaa hin beekne koroonaa vaayiraasii,Har'aa dhiiraa nut taati.
Utumaa dhaga'anii gorsa ogeessa fayyaa. Innoo gurraachaa hin miidhu jedhani walitti qoosuu. Waaqayyoo nu â€¦ Continue reading Koroonan Ulfina hinbeektu. Tokkumaan Hummna! Gammchuu G.
Babarreedu Oromoo Utuu naaf hindhagayin Firrikoo gamaanaa fi gamaa Bakka rakkoo kiyyaatti Situ dursee argama Aantiidhaafi obbolaa koo Dursitee natti siqxa Caba koo naaf dhidhiibdee Dhiiga koo narraa dhiqxa Kaasuu keetti na fuutee Qabdee lafaa na kaasta Dugda keetti na baattee Bowwaa keessaa na baafta Gaafa guyyaaa gammaachuu Wajjiniin nyaannee kolfaa Gaafa guyyaa dhiphinaa Kan â€¦ Continue reading Sin Jaalladha Hiriyaa koo.
Dugugaatii alkolii dhugee Ani hin qabu machii Gitiintiree achumaa Dhiitaa hin oolu dachii. Humna asii gadii horde Lafa qabsiisee luka Dhaabaacha hin oolu anoo Akka dhagaafi mukaa Ofii kiyyaas jijjiramee Akkaa ani jijjirreef biyya Sagalee hammeenya keetu Sammuu koo keessaa iyya Qootisa bulleeffame Akkan gadi dhidhiitu Achumarra na oofta Lafti dhiitee bariitu Gammachuu G. Ofiifuu gaaddisa hin taane Maaltu sitti baqata?
Kanaaf namni si afrgu Buqqisee si darbata. Ilbiisni umurii hin qqabnetu Jala kan kee daaddisa Bareedina bifaa malee Taatee hin â€¦ Continue reading Keelloo. Kan wal kajeelu Afaan hin qajeelu Akaayin bara beela firaan adda nama baafti Jaalachaa oolaniis intala haadhaa hin fuudhan Harka goowwaatin boolla jawwee safaru. Haadhaatu du'e jedhani ilmoo bofaa wajjiin bo'icha hin ta'an -abaarsi goowwaa eeboon qixa. Skip to content.
Guyyaa Gootota Oromoo (Walaloo) â€“ Imimmaan Qeerransaa
Sammuu Namaa - xcxi. Leggesee T Jaallataatiin!. Walaloo waan hinqabneef sirboota Hindiifi Sudaan dhaggeeffannee yeedaloosaa gara Afaan Oromootti jijjiiruudhaanis taphanneerra.
Qabiyyeen kitaabotakoofi ani gulaalee akka waliigalaatti asoosamoota, kitaabota walaloo, kitaaba seenaafi kan barnootaadha. Maqaansaa Gobana Daaccee jedhamee beekama. Og-barruun kan ilmaan namaa haala jiruuf jireenya isaanii keessatti gaddaa fi gammachuu isaanii ittiin ibsataniidha.
Gara fuula duraattiis haaluma jalqabdaniin hojii abbaan isaa dhabamee kana fiixaan akka nuuf baaftan,Faarfannoota faarfattoota kanneen akka: Nabiyyuu Raagaa album 1ffaa,3ffaa,Malkaamuu Waaqshumaa 1ffaa fi 2ffaa,Tasfaa Firoomsaa 1ffaafi2ffaa,Baacaa Bayyanaa 1ffaa ,2ffaa fi 3ffaa f. Biyyoota Dimokiraasiin dhugaa dagaage keessatti, gareen barbaade paartiin siyaasaa ykn jaarmiyaan siyaasaa tokko kan. Warraaqsa dargaggoota addunyaa keessa jirra. Shororkeessummaa dhiigaan haqameâ€¦!!!
Babarreedu Oromoo Utuu naaf hindhagayin Firrikoo gamaanaa fi gamaa Bakka rakkoo kiyyaatti Situ dursee argama Aantiidhaafi obbolaa koo Dursitee natti siqxa Caba koo naaf dhidhiibdee Dhiiga koo narraa dhiqxa Kaasuu keetti na fuutee Qabdee lafaa na kaasta Dugda keetti na baattee Bowwaa keessaa na baafta Gaafa guyyaaa gammaachuu Wajjiniin nyaannee kolfaa Gaafa guyyaa dhiphinaa Kan â€¦.
Walaloon kun kan uummataaf dhihaate bara yoo tahu, haala yeroo waliin wal qabatuuf ni barsiisaa jennee maxxansine. Warra jaalala of keessaa hin qabne 2Xim a. Utuu balaan hin qaqqabin dursanii ittisuun hafnaan erga balaan dhaqqabeetis yeroodhaan hin birmatan,birmatanis diina uummata shororkeessee dhokate hordofanii qabuu caalaa uummata shororkaayeen manatti galaa jedhanii reebuutu mul'ata.
Obbo Ibsaa: Yeroo Hayilasillaasee nuti Ijoollee turre. Jecha jaalala pdf.
State law says dog droppings must be collected and buried in a sanitary landfill. Guyyaa tokko Dubbii jalqabaa taasisuuf gara Morkattoota isaatti dhihaate. Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul.
Jaalala soba Jaalala soba. Kaayyoonkoo guddaanis maallaqarra utuu hintaane, qaawwaa ogbarruu Oromoo namudataa ture duuchuuf ture. Walaloo Sin Jaalladha Hiriyaa koo Babarreedu Oromoo Utuu naaf hindhagayin Firrikoo gamaanaa fi gamaa Bakka rakkoo kiyyaatti Situ dursee argama Aantiidhaafi obbolaa koo Dursitee natti siqxa Caba koo naaf dhidhiibdee Dhiiga koo narraa dhiqxa Kaasuu keetti na fuutee Qabdee lafaa na kaasta Dugda keetti na baattee Bowwaa keessaa na baafta Gaafa.
Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa. The primary purpose of Oromedia is to serve freedom loving generations so that they can give informed decisions. Walaloon Boombii Niwukilarii ittiin tuulluu yaadaa jigsaniidha!.
Kanatu dhufaa maaltu beeke. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Artistoonni Oromoo aartii dhimma kana ibsu qopheessuu wallee baasuu, walaloo, diraamaa, qopheessuu; postaroota maxxansiisuu. Tokko akkuma beekamu wagga waggan walgeenyee, karaa karaan faaruu, walaloo, weeduu, barruu dubbifamu fi oginaa ulfina saaniin walgitu qopheessina, waliin weedddisna ni sirbinas.
Jaalala onne Jaalala onne. Filadheen asitti dhaladhe utuu hintaane, ofiisaan filatee Oromiyaatti kan na uume Waaqayyodha!.Eagles - Dordrecht 1. Allsvenskan 17:00 Trelleborgs - Jonkopings 1.
Friendly Games 20:45 Poland - Mexico 1. Football League Trophy 19:45 Lincoln City - Notts County 1. Ligue 2 18:45 Le Havre - Reims 1. Ligue 2 19:00 Tours - Bourg Peronnas 1.
Ligue 2 19:00 Niort - Clermont 1. La Coruna - Las Palmas 1. Liga 1 17:05FCSB - Poli Timisoara 1. Ligue fiberhome an5506 04 fg bridge 18:05 Nice - Strasbourg 1. Serie A 18:05 Vasco - Coritiba 1. Seria A 16:30 Verona - Benevento 1. Etienne - Metz 1. Pauli - Kaiserslautern 11 October Russia.
KHL 16:30 Dynamo Moscow - Bars Kazan 1.
Bubbee Walaloo Gammachis Bayyanaa 2017
Serie B 10:30 Pescara - Cittadella 2. Serie B 13:30 Frosinone - Cremonese 2. Eliteserien 13:30 Rosenborg - Sarpsborg 08 1. England 14:00 Cardiff - Derby 1. Bundesliga 16:30 Ingolstadt - Darmstadt 98 1. Copa del Rey 19:00 Zaragoza - Lugo 1. Premier - League 18:00 Man U - Everton 1. League One 18:00 Portsmouth - Fleetwood 1. Eerste Divisie 18:00 Helmond Sport - Jong Ajax 1.
Copyright © 2021 Utuu walaloo.